ह्वात्तै बढ्यो प्याज, लसुन र गालभेडाको मुल्य, हेर्नुहोस् कुन तरकारीको मुल्य कति ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/ह्वात्तै बढ्यो प्याज, लसुन र गालभेडाको मुल्य, हेर्नुहोस् कुन तरकारीको मुल्य कति ?
काठमाडौं – सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा लसुन, प्याज लगायत केहि तरकारीको खुद्रा मूल्य बढेको छ । त्यस्तै आज गालभेडाको मूल्य पनि बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समीतीका अनुसार आज लसुनको खुद्रा मूल्य बढेर किलोको ३२० रुपैया पुगेको छ । आज भारतीय सुकेको प्याज पनि २० रुपैयाले बढेर किलोको १०० रुपैयामा किनबेच भएाके छ ।
रुपैयाँ आइतबार किलोको २९० रुपैयामा किनबेच भएको लसुनको मूल्य आज बढेर किलोको ३२० रुपैया पुगेको हो । आज ठुलो गोलभेडा किलोको ८० रुपैयाँ, सानो गोलभेडा किलोको ६० रुपैयाँ, पुदिना किलोको ३२० रुपैया र रातो आलु किलोको ५० रुपैया रहेको छ ।
त्यसैगरी आज अदुवा किलोको खुद्रा मूल्य २००रुपैया, भेडे खुर्सानी किलोको १३०, लोकल बन्दा किलोको ४० रुपैयाँ, फर्सी किलोको ७० रुपैयाँ, मेथी र चम्सुरको साग किलोको ४० रुपैयाँ र स्थानीय काउली किलोको ६० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै भिण्डी किलोको १२० रुपैयाँ, लोकल गाजर किलोको ५० रुपैयाँ, बरेला किलोका ९० , पिंडालू किलोको ७० र स्कूस किलोको ६० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
किन हुन्छ टन्सिल ? थाहा पाउनुहोस् लक्षण र बच्ने उपाय
२४ प्रतिशत नेपालीले खान्छन् उच्च रक्तचापको औषधि, गण्डकी प्रदेशमा धेरै
मोटोपनको समस्याबाट छुटकारा पाउन जिरा सेबन गर्नुहोस्